श्रीमानलाई को रोनाले लग्यो, पेटमा ८ महिनाको बच्चा हुर्किदै छ अब मैले यो बच्चालाई कसरि जन्म दिउ ? – Taja Khawar
श्रीमानलाई को रोनाले लग्यो, पेटमा ८ महिनाको बच्चा हुर्किदै छ अब मैले यो बच्चालाई कसरि जन्म दिउ ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ११, २०७८ समय: ११:३४:१५
साउन ११, २०७८ –
रुपन्देही जिलणलाकि सन्दिया जस्को पेटमा आठ महिनाको गर्भ हुर्किरहेको छ । तिन बर्ष पहिले मागी बिबाह गरेकी सन्ध्य अहिले एक्लै भएकी छिन्।
उनका श्रीमानलाई केहिदिन अगाडि मात्र‌ै कोरोनाले लग्यो अहिले उनी एक्लि भएकि छिन् । तीन बर्ष पहिला मागि बिवाह गरेकि सन्दिया उनको श्रीमानको कान्छि श्रीमती हुन्। जेठि श्रीमती पोइला गएपछि उनलाई बिवाह गरेका थिए ।
आफ्नो सन्तानलाई राम्रो मान्छे बनाउने सोच बनाएका यस परिवारको खुसि भगवानले खोस्यो। आफ्नो सन्तान संग रमैलो पल संगै खुसि भएर बस्ने उनको इच्च्क्ष सपनामै मात्र सिमित भयो।
मेरो यस्तो अवस्था छ घरमा कमाउने मान्छे कोहि नभएको हुनाले भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हस्पिटलमा दुबै आमा र सन्तानलाई बचाउन दुई लाख भन्दा बढि खर्च लाग्ने डाक्टरले बताएका छन् । उपचारको खर्च एकातिर भो’कभोकै बस्नु पर्ने बाध्यता अर्कोतिर ।
आफ्नो श्रीमान गु मेपनि आफ्नो बच्चालाई भने बचाइदिनु र बच्चानै आफ्नो जिउने आधार हुने उनी बताउँछिन् । आठ महिना भैसक्यो अब कसरि बच्चालाई जन्म दिने भन्ने कुराले रुन मन लाग्छ। पुरा जानकारी भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
Last Updated on: July 26th, 2021 at 11:34 am